Nagu saabsan - Nanchang Hot Fashion Co., Ltd.
Hot Fashion Co., Ltd. oo la aasaasay sanadkii 2003 waa shirkad kaladuwan oo isku dhafan naqshadeynta, horumarka iyo wax soo saarka dhoofinta iyo hawlgalka ganacsiga e-commerce. Shirkaddu waxay ku taal Nanchang City, Gobolka Jiangxi, Shiinaha oo leh shabakad ballaadhan oo isku xira gaadiidka. Waxay leedahay 8250 mitir murabac oo saldhig wax soo saar casri ah iyo 300 oo shaqaale ah.
Fashion kulul ayaa caan ku ah dhanka dharka isboortiga ee Shiinaha. Haddana wax soo saarkoodu si guul leh ayuu suuqa ugu aasaasay Mareykanka Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Japan, Brazil iyo Midowga Yurub.
Badeecadeedu waxay gaarayaan funaanadaha funaanadaha, poloska, dhididka dharka daboolan, kubbadda koleyga iyo funaanadaha / funaanadaha kubadda cagta. Waqtigaan la joogo, Hot Fashion wuxuu leeyahay 60 shirkadleyaal adduunka oo idil wax soo saarkiisana waxaa lagu iibiyaa barnaamijyada internetka ee gudaha iyo dibaddaba.
Hot Fashion waxay ku siin kartaa astaamaha OEM iyo ODM iyo qaabab siyaabo kala duwan sida wareejinta kuleylka, daabacaadda shaashadda, daabacaadda sublimation, daabacaadda, daabacaadda 3D iyo in ka badan.
Fashion-ka kulul wuxuu leeyahay Naqshad dhameystiran iyo Waax soosaarid iyo Daabacaad oo awood u leh inay ku gaaraan namuunad muddo 5 maalmood gudahood ah iyo wax soo saar ballaaran 15 maalmood gudahood.
Fashion-ka kulul wuxuu leeyahay koox iibinta kadib u heellan daryeelka macaamiisheeda.
Moodo kulul ayaa ku kasbaday kalsoonida macaamiisheeda Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Afrika iyo Aasiya tayadeeda, qaabkeeda iyo farsamooyin wanaagsan.
Halkan Hot Fashion, annaga, kooxda xamaasadaysan, waa ku faraxsanahay waxa aan qabano. Waxaan nahay hami iyo u heellan in aan dhigno raadkeenna xilligan aan ka adeeganayno internetka oo aan ka helno xitaa suuq ballaaran oo adduunka oo dhan ah. Waxaan sifiican u ognahay dariiqa lagu gaari karo hadafkan inuu noqon doono macaamiisha waxaanan ku gaarnay tan alaabtayada tayada sare leh iyo adeega macaamiisha ee weyn. Waxaan soo dhaweyneynaa tikniyoolajiyadda casriga ah, tababarka shaqaalaha iyo kulamada joogtada ah ee lala yeesho asxaabta kale ee warshadaha sidaa darteed waxaan had iyo jeer ku jirnaa hormoodka hore ee hal-abuurnimada isla markaana ilaalinaa dareenkeena qaab.